कमलः सामान्यतया चिनियाँ रेष्टुराँम�� खाना खानुभन्दा पहिले हामी सधैं सोध्छौं- तपाईंकहाँ विशेष तिहुन/तरकारी के छ? किनभने चिनियाँ तिहुन/तरकारीका विभिन्न जात हुन्छन् र तिनका स्वादहरु भिन्नै खालका हुन्छन्। तिनको प्रायजसो स्थानीय विशेषता छ। जस्तै भनौं, स् छ्वान प्रान्तको तरकारी पीरो हुन्छ, शाँग हाईको तरकारी गुलियो हुन्छ। त्यसैले तपाईंले तरकारी माग्नुभन्दा पहिले स्पष्टसँग थाहा पाउनुपर्छ। होइन र?
कमलः मलाई पनि थाहा छ, चिनियाँ चिया एकदमै प्रसिद्ध छ। मैले चिन��याँ साथीलाई दिउँसोको खाना खुवाउँदा उहाँहरुलाई कालो चिया चाहिन्छ कि चाहिदैन भनेर सोध्नचाहेको खण्डमा चिनियाँ भाषामा यसलाई कसरी भन्नुपर्छ?